तेरिया मगरलाई भोट कसरी गर्ने ? (अन्तरबार्ता) – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
भारतमा पुगेर धूम मच्चाउन पाउँदा कस्तो लागिरहेको छ ?
धेरै रमाइलो लागिरहेको छ । निकै खुशी छु । मलाई सबैले माया गर्नुभएको छ । यसपाली घर आउँदा झन धेरै माया पाएँ । खुशी लागेको छ । आफ्नो फेमेलीलाई भेट्न पाएँ । सबैबाट सम्मान पाएँ । म बुटवल आएको थाहा पाएर धेरैजना आउनुभएको थियो भेट्नलाई ।
कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने ठाउँसम्म कसरी पुग्न सफल भइयो ?
पहिले इन्डियाका मान्छेहरुले डान्सको भिडियो मागे । मैले आफ्नो डान्सको भिडियो पठाएँ । उनीहरुलाई डान्स मन परेछ । अनि मलाई अडिसनमा बोलाए । म अडिसनमा गएँ । अडिसनमा सेलेक्ट भएँ । फेरि मेघा अडिसनमा गएँ । त्यहाँ पनि सेलेक्ट भएँ । त्यहाँबाट टप सिक्स्टिनमा पुगेपछि धेरै खुशी भएँ । त्यसपछि फेरि टप टेनमा परें । टप फाइभमा पर्छु या पर्दिन भन्ने खुल्दुली थियो । त्यहाँ पनि परें । मलाई एकदमै खुशी लागिरहेको छ अहिले ।
भारतका कलाकार र निर्णायकहरुले तिम्रो प्रस्तुति देख्दा के भने ?
मलाई धेरै माया गरे । मेरो प्रस्तुति मन पराए । उनीहरुलाई नेपाल र नेपाली धेरै मन पर्छ रे । नेपाल सुन्दर जग्गा हो भनेर भन्छन् । अनि नेपालमा हिमाल, पहाड, जंगल, नदी, झरना सबै कुराहरु छन् भनेर प्रशंसा गर्छन् । उनीहरुले मेरो देशको बारेमा यसरी प्रशंसा गर्दा मलाई पनि गर्व लाग्छ ।
टप फाइभसम्म पुगिसकेकी छौ । अब पहिलो हुने सम्भावना कस्तो छ ?
सम्भावना देखेको छु । सोचेको छु फस्ट हुन्छु । जनताले अहिलेजस्तै सपोर्ट गर्नुभयो भने, भोट गर्नुभयो भने म पक्कै फस्ट हुनेछु ।
तिमीलाई फस्ट बनाउन नेपालीहरुले के गर्नुपर्छ ?
मलाई माया गर्नुपर्छ । भोट गर्नुपर्छ । नेपालीहरु जहाँ हुनुहुन्छ, म सबैलाई आग्रह गर्छु कि मलाई धेरैधेरै भोट गर्नुहोला । मलाई डिआईडी लिटिल मास्टरको विनर बनाउनुहोला ।
कसरी गर्नुपर्छ भोट ?
यहाँ क्लिक गर्नुहोस । मेरो नाम आउँछ, फोटो आउँछ । त्यहाँ भोट नाउ लेखिएको ठाउँमा क्लिक गरेर तपाई‌ले आफ्नो नाम, इमेल, फोन नम्बर राखेर सवमिट गर्नुभयो भने भोट जान्छ । अनि कोही नेपाली भारतमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरुले फोनमा मिस कल गरेर पनि भोट गर्न सक्नुहुन्छ १८००८६६६००७ मा । ०७ चाहिँ मेरो कोड नम्वर हो । (भारतीय नम्बरबाट मात्र मिस कल गर्न सकिन्छ ।)
उपाधि जितेपछि के गर्ने योजना छ ?
म फस्ट भएपछि के गर्छु…..खै अहिले त थाहै छैन । तर म फस्ट भएँ भने मेरो नेपालको नाम रोशन गर्न सक्छु । अनि विश्वमा आफ्नो फेमेली र आफ्नो देश चिनाउन सक्छु ।
फोटो – तेरियाको सम्मानमा उर्लेको जनसागर
This entry was posted in People and tagged तेरिया. Bookmark the permalink.
← बिन्दु परियार – यो हो मेरो सच्चा कहानि
हामीले उठाएको कुरा लागु हुने भएछ, नोटमा केरमेट र स्टिज लगाउन नपाइने →